Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo ka walaacsan soo noqoshada Xildhibaan..... - Awdinle Online
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ayaa ka walaacsan in fadhiyada Gollaha uu kusoo laabto Xildhibaan Saadaq Sheekh Yuusuf oo ka tirsan Xildhibaannada Galmudug.
Warar hoose oo aynu caawa ka helnay Xafiiska Guddoomiye Gacal ayaa sheegaya in uu jiro abaabul lagu hor istaagayo hadii ay dhacdo in Saadaq Sheekh Yuusuf uu dib ugu soo laabto Kulamada Gollaha, maadaama uu yahay Xildhibaan ka tirsan Gollaha, kana mid ah 20-kii Xildhibaan ee awood qaybsiga Ahlusunna kaga mid noqday Baarlamaankan labaad.
Gacal oo arintan ka walwalsan ayaa Madaxtooyada ku qancinaya in soo noqoshada saadaq ay bilaaw u noqon karto dib u noolaanshaha Awoodii Ahlusunna, isagoo muujinaya in Xildhibaankani ka mid yahay Hoggaanka Sare ee Ahlusunna gaar ahaan sadaxda masuul ee ugu awoodda badneyd.
Saadaq oo Deeganada Galmudug ka maqnaa tan iyo xiligii uu dhacay Dagaalkii Ahlusunna lagaga adkaadey ee horaantii sanadkan ayaa bilaawgii todobaadkan yimi Deegaanka Huurshe, si uu kaga qayb galo Siyaarta halkaa kasocota, waxa uu huurshe kula kulmay Xildhibaano iyadoo ay suuragal tahay in uu yimaad Magaalada Dhuusamareeb.
Guddoomiye gacal oo habeen hore la kulmay xildhibaanada kasoo horjeeda ayaa ka biyo diiday in uu bixiyo mushaaraadka Xildhibaankan oo ka mid ahaa dhowr qodob oo xildhibaanada u tagay ay kala hadleen, waxa uu ku ku dooday in saadaq yahay mucaarad oo isaga uusan awood u laheyn in uu go’aan ka gaaro mushaar-siintiisa.
Previous articleKheyre oo Warqad culeys ku ah Farmaajo u diray Ra’iisul Wasaaraha Cusub
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo wax laga weeydiiyay dhiibistii Qalbi Dhagax